Saddex Kooxood Oo Ku Dagaallamaya Xiddig Ka Tirsan Barcelona & Jose Mourinho Oo Kusoo Biiray - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaSaddex Kooxood Oo Ku Dagaallamaya Xiddig Ka Tirsan Barcelona & Jose Mourinho Oo Kusoo Biiray
Saddex Kooxood Oo Ku Dagaallamaya Xiddig Ka Tirsan Barcelona & Jose Mourinho Oo Kusoo Biiray
Barcelona ayaa ku jirta xilli ciyaareed mashquul badan oo ay ku hawlan tahay iibinta ciyaartoydeeda iyo dibu-dhiska kooxda, iyadoo sidoo kalena ku dedaalaysa inay dhinto kharashkeeda si loogu diiwaangeliyo saxeexyadii cusbaa ee ay sameeyeen.
Sida uu qoray wargeyska Diario Sport, saddex kooxood oo waaweyn oo Talyaani ah ayaa xidhiidh lasoo sameeyey Barcelona iyaga oo dhamanatood doonaya ciyaartoy kaydka ku dhamaystay xilli ciyaareedkii hore, haddana loo sheegay in aanu ku jirin qorshaha tababare Ronald Koeman.
Laacibka khadka dhexe uga ciyaara xulka qaranka Bosnia iyo Barcelona ee Mioralem Pjanic ayay soo dalbadeen kooxihiisii hore ee Juventus iyo Roma, sidoo kalena horyaalka dalkaas ee Inter Milan ayaa iyaduna dalab usoo dirtay.
Saddexdan kooxood ayaa u yimid Barcelona iyagoon wax lacag kaash ah wadanin, kuna doonaya Pjanic qaab amaah ah, waxaanay waliba ku xidheen inuu laacibkani sameeyo mushahar dhimis, taas oo la rumaysan yahay in aanu Pjanic ogolaan doonin.
Barcelona ayaa dhinaceeda ay ka go’an tahay in uu Camp Nou ka baxo Pjanic iib iyo amaah midkay doonto ha noqotee, maadaama ay u baahan tahay inay meesha ka saarto mushaharkiisa, si loogu ogolaado in loo diiwaangeliyo saxeexyada cusub ee ay xagaagan samaysay.
Joan Laporta ayaa uu warku sheegay inuu ogyahay, in kooxdiisu ka sarrayso khadka cas ee mushaharka ee loo jeexay, taas darteedna uu dareerinayo dersin ciyaartooyo ah, haddii kalena uu La Liga ka diidi doono inuu u diiwaangeliyo xiddigihii cusbaa ee ay lasoo saxeexdeen.
Tababaraha reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa si aad ah u danaynaya Pjanic oo waqti qurux badan kusoo qaatay Roma ka hor intii aanu tegin Juventus, taas oo sannadkii hore uu uga soo wareegay Barcelona, waxaana la kala beddeshay isaga iyo Arthur Melo.